AC Milan oo galabta tijaabisey shax cusub kuna badisay – Gool FM
AC Milan oo galabta tijaabisey shax cusub kuna badisay
(Milano) 08 Okt 2017 – Macallinka ay diiraddu saaran tahay ee Vincenzo Montella ayaa galabta tababarka ku tijaabiyay shaxda 3-4-2-1, jeer ay Milan isu diyaarinayso kulanka adag ee Derby della Madonnina oo ay Axadda soo socota la leedahay Inter oo ay San Siro ku wada dheelayaan habeenkii.
AC Milan ayaa kulan is kululays ah la ciyaartay da’yarteeda uu layliyo Gennaro Gattuso ee loo yaqaan Primavera, kuwaasoo ay 3-1 ku garaaceen iyadoo ay goolasha ku qaaraameen Fabio Borini, Giacomo Bonaventura iyo Jose Mauri.
Waloow ay laacibiin badani ku maqan yihiin waajibaadka qaran, misna Montella wuxuu tijaabiyay shaxda cusub ee 3-4-2-1 taasoo ay Suso iyo Bonaventura ka gadaal ciyaarayeen hal weerar oo dhexe.
Waana shax ay u badan tahay in Rossoneri ay isla shaxdan ku wajihi doonto isla Inter todobaad dhamaadka soo aaddan.
GOOGOOSKA: Egypt vs DR Congo 2-1 (Egypt oo usoo baxday KA2018)